0 Thursday June 04, 2020 - 12:43:07
0 Thursday June 04, 2020 - 11:49:54
Dowladda Federaalka ayaa ku dhawaaqday in dhowaan dib loo furi doono garoonka diyaaradaha caalamiga magalada Muqdisho oo ku xirmay caabuqa Carona Virus.
0 Wednesday June 03, 2020 - 10:47:10
Bilo ka hor ayay ahayd markii wilaayada jubbooyinka looga dhawaaqay xamlo loogu magac daray carabiyaynta dadka oo ujeedadeedu ay ahayd in dadka lagu baro luuqadda carabiga, si ay ugu fududaato barashada diinta Islaamka.
0 Wednesday June 03, 2020 - 10:37:21
Caabuqa Covid19 ayaa dhimashadii ugu badneed ka geystay wadanka Ingiriiska oo ah wadanka labaad ee caalamka ay dadkiisu ladhibanyihiin Viruskan saf mareenka ah.
0 Wednesday June 03, 2020 - 10:18:58
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar hubaysan oo xalay ka dhacay deegaan katirsan gobolka Gedo ee dhaca Koonfurta dalka Soomaaliya.
0 Wednesday June 03, 2020 - 09:52:56
Wararka ka imaanaya dalka Maraykanka ayaa ku waramaya in weerar khasaare dhaliyay uu ka dhacay gudaha saldhig millitri oo ku yaala wadankaas, kaas oo ay leeyihiin ciidamada milliteriga Maraykanka.
0 Tuesday June 02, 2020 - 12:34:34
Dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in ay awood melleteri u adeegsan doonto daminta kacdoonka shacbiga ah ee kusii xoogeysanaya magaalooyinka waaweyn ee wadankaasi.
0 Tuesday June 02, 2020 - 12:33:34
Markii ugu horraysay xukuumadda Xasan Cali Kheyre ayaa iclaamisay in ay qaab xisbi uga qeyb geli doonto doorashooyinka madaxtinimo ee dhici doona sanadda soo socota.
0 Tuesday June 02, 2020 - 12:31:48
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar qarax oo lagu qaaday ciidamo katirsanaa dowladda Federaalka Soomaaliya ay ku lahaayeen gudaha magaalada Muqdisho.
0 Tuesday June 02, 2020 - 10:15:57
Wararka ka imaanaya gobolka Jubbada hoose ayaa sheegaya in uu ka dhacay weerar lagu dilay ciidamo katirsan melleteriga dowladda Kenya ee duullaanka ku jooga dalka Soomaaliya.
0 Monday June 01, 2020 - 19:10:42
Xaalad colaadeed oo aad udaran ayaa lagasoo sheegayaa xuduuda ay wadaagaan wadamada itoobiya iyo Suudaan ee bariga qaaradda Afrika.
0 Monday June 01, 2020 - 12:37:05
Fagaare kuyaal deegaanka Doon Buraale ee duleedka degmada Qoryooleey waxaa shalay gelinkii dambe ka dhacay xad kamida xuduudda Alle kaasi oo lagu fuliyay nin xadgudub geystay.
0 Monday June 01, 2020 - 12:11:30
0 Monday June 01, 2020 - 10:45:14
Ciidamada dowladda Federaalka ayaa wali xaafadaha magaalada Muqdisho ka geysanaya dilal ay ku beegsanayaan wiilashada dhalinyarada ah ee aan waxba galabsan.
0 Monday June 01, 2020 - 10:25:09
0 Sunday May 31, 2020 - 16:35:18
Masjidka Al-hudaa oo ku yaala degmada Saakow ee Jubbada dhexe waxaa ka socda howllo dhismo oo lagu ballaarinayo masjidka kadib markii ay kordheen dadka ku tukada salaadaha.
0 Sunday May 31, 2020 - 16:34:18
0 Sunday May 31, 2020 - 16:19:36
Wararka ka imaanaya deegaannada dhaca duleedka galbeed ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in halkaas uu ka dhacay qarax dad badan oo shacab ah ku dhinteen.
0 Sunday May 31, 2020 - 12:13:35
Warbixinno cusub oo soo baxay ayaa sheegaya in shaqaalaha hay'adaha UN-ka ay geysteen gabood fallo fool xun oo ka dhan ah dadka danyara ah ee ku dhaqan dalalka ay ka shaqeeyaan.
0 Sunday May 31, 2020 - 11:52:03
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dilal saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay qaar kamid ah degmooyinka gobolka Banaadir waxaana dilalkaas lagu fuliyay askar iyo saraakiil dowladda katirsan.
0 Sunday May 31, 2020 - 11:40:48
Wadanka Mareykanka waxaa sare usii kacaya kacdoonnada rabshadaha wata oo ay dhigayaan dadka caddaanka ah ee laga tirada badanyahay.
0 Sunday May 31, 2020 - 11:27:16
0 Saturday May 30, 2020 - 20:39:26
Dagaalyahanno katirsan Al Shabaab ayaa markale weerar qorshaysan oo khasaara dhaliyay ka fuliyay deegaan katirsan gobolka Sh/hoose.
0 Saturday May 30, 2020 - 20:37:26
Fagaare kuyaal deegaan hoos yimaad degmada Qoryooleey ee Sh/hoose ayaa maanta gelinkii dambe lagu dilay nin saaxir ah oo dad badan ku dhibaateeyay sixir.
0 Saturday May 30, 2020 - 20:32:03
Siyaasiyiin iyo waxgarad soomaaliyeed ayaa si kulul uga hadlay xasuuqii ay maleeshiyaadka dowladda maalmo ka hor ka geysteen deegaanka Gololeey Daa'uud ee duleedka degmada Balcad.
0 Saturday May 30, 2020 - 10:33:16
« Prev1 ... 9101112131415 ... 359Next »